Manchester United oo dooneysa inay Vidic ka iibiso Anzhi Makhachkala. - Caasimada Online
Home Warar Manchester United oo dooneysa inay Vidic ka iibiso Anzhi Makhachkala.
Manchester United oo dooneysa inay Vidic ka iibiso Anzhi Makhachkala.
Manchester United ayaa dooneysa in si la yaab leh ay kabtankooda Nemanja Vidic lacag sare uga iibiso kooxda aadka u xiiseyneysa ee Anzhi Makhachkala, sida ay ogaatay shabakada Goal.com.
Kooxda Old Trafford ayaa aragta inay 30 jirkaan ku lumen karto 41 milyan oo euro oo ay ku dooneyso kooxda ka dhisan dalka Ruushka, daafaca reer Serbia ayey hareeyeen dhaawacyo is daba joog ah ka dib markii uu garoomada ka maqnaa 12 bilood hadana uu qaliin ku maqan yahay.
Anzhi, ayaa dooneysa inay soo aruursato ciyaaryahano magic ku leh kubada cagta iyadoo ay kooxdaani heysato lacago fara badan oo ay suuqa geliyaan. Vidic ayaana laga yabaa inuu mushaar fara badan ugu baqoolo Dalka Ruushka.